Hokkara Yunivarsiitii: Yeroo barattoonni mooraa itti bahaniifi galan daangeffame - BBC News Afaan Oromoo
Hokkara Yunivarsiitii: Yeroo barattoonni mooraa itti bahaniifi galan daangeffame
Madda suuraa, Fuula Ministeera Saayinsiifi Dhaabbileen Barnoota
Barattoonni dhaabbilee barnoota ol-aanoo halkan keessaa sa'aa afuriin booda doormii isaanii ala ta'uu akka hin qabne Ministeerri Saayinsiifi Dhaabbileen Barnoota Ol-aanoo beeksiseera.
Akka qajeelfama ministeerichi baasetti yunvarsiitiiwwan barattoonni ganama bari sa'aa 12:00 duraafi halkan ammoo sa'aa 1:00n booda mooraa yunvarsiitii isaaniin ala turuu akka hin qaban.
Seera haaraa bahee kana hojiirra oolchuudhaaf gaggeessitoota, waardiyyoota yunvarsiitii, qaamolee nageenyaa mootummoota naannoofi Federaalaa odeeffannoo wal jijjiiruun waliin hojjetu jedhameera.
Ministeerichatti Daarekterri Daarektoreetii Komunikeeshinii Obbbo Dachaasaa Gurmuu saatiin barattoonni itti socha'an kun daangeffamuun isaa barattoonni yeroo saatii malee mooraan ala socho'an rakkoon akka isaan hin mudanneef jecha of-eeggannoodhaaf kan taasifamedha jedhan.
Haata'u malee, barattoota bara kana yunivarsiitiiwwan keessatti ajjeeffaman keessaa garri caalaan kan ajjeefaman mooraa keessatti, innumaattuu doormii isaanii keessatti ture.
Gaaffii kana kan gaafataman Obbo dachaasaan, "Rakkoowwan mooraa keessa jiran foyyeessuudhaaf haala nageenya mooraa ittiin cimsuu dandeenyu irratti hojjenneera. Mooraa alatti ammoo rakkon akka hin qaqqabneef kan murteen kun darbe," jechuun deebisan.
Mooraa keessatti eegumsi fooyya'aan akka jiru kan himan Obbo Dachaasaan, nagaan akka bu'uuf jecha yunivarsiitiiwwanitti eegumsi poolisii Federaalaatiin taasifamaa jiru jijjiirama argamsiisaa jira jedhan.
Dabalataanis ministeerichi nageenyi waaraan yunivarsiitoota keessa akka jiraatu taasisuudhaaf koree aanga'oota boordii yunivarsiitiiwwan, aanga'oota naannolee yunivarsitiiwwan itti argamaniifi maanguddoonni keessatti argaman hundeeffamee qaamota dhimmi ilaallatu waliin mariin taasifamaa jira jedhan.
Nageenya yunivarsiitiiwwan keessa jiru amansiisaa taasisuun barattoonni akka gara barnoota isaaniitti deebi'an gochuudhaaf poolisiin Federaalaa akka ramadaman ibsuun haalli nageenyaa amma jiru gaarii ta'uu BBC'tti himaniiru Obbo Dachaasaan.
"Yeroo nageenya mooraa keessa jiru jabeessinutti moora alatti nageenyi argame akka duuba hin deebineef mirkaneessudhaaf hojjetamaa jira," jedhu.
Yunivarsiitiiwwan hedduun barattoonni deebi'anii barnoota isaanii akka jalqabaniif waamicha dhiyeessineerra kan jedhu Obbo Dachaasaan, barattoonni yunivarsiitiiwwan qe'ee isaaniitti argamutti argamuun hokkara kaasuun ammoo yakkadha jedhan aanga'aan kun.
Torbee dhufurraa jalqabees barnootni Yunivarsitilee rakkoon nageenyaa itti dhalatee ture keessatti itti fufas jedhaniiru.
Yunivarsitiiwwan 22 rakkoon nageenyaa keessatti uumaman keessatti addatti hojjetamaa akka jirun kan dubbatan Obbo Dachaasaan yunivarsiitiiwwan kanneen keessatti tarkaanfiiwwan fudhataman fi sirreeffamni taasifaman walitti qabamuun harka isaanii akka galeen beeksisuuf akka jiran himaniiru.